Cirbadeynta Ivermectin, Amoxicillin loogu talagalay duritaanka - Lihua
Albendazole waa anthelmintic synthetic oo ka tirsan kooxda benzimidazole-derivatives oo leh waxqabadyo ka dhan ah dixiriga ballaaran iyo heerka qiyaasta sare ee sidoo kale heerarka qaangaarka ee beerka. Waxqabadka Farmashiyaha Albendazole oo lagu daro borotiinka microtubule ee eelworm ayaa door ka ciyaara. Ka dib albenzene oo lagu daro β-tubulin, waxay ka hortagi kartaa kala-yaraanta u dhexeysa albenzene iyo α tubulin oo ku soo ururaya microtubules. Microtubules waa qaab dhismeedka aasaasiga ah ee m ...
Tilmaamaha Waxay hagaajinayaan waxqabadka koritaanka iyo bacriminta. Xaaladda cillad la'aanta fiitamiinnada, macdanta iyo walxaha raadraaca. Markaad bedesho caadooyinka quudinta Ka caawi xayawaanka soo kabashada inta uurku jiro. Intaas waxaa sii dheer inta lagu jiro daaweynta antibiyootikada. U adkaysiga weyn ee infekshinka Intaas waxaa sii dheer inta lagu jiro daweynta ama ka hortagga cudurka dulinka. Kordhi caabbinta cadaadiska. Maaddaama ay birtiisu sarreyso, fiitamiinnada iyo waxyaabaha ku jira waxyaabaha raadraaca ah, waxay ka caawisaa Xayawaanku inuu la dagaallamo dhiig-yaraan iyo inuu dardar-geliyo qoritaankiisa ...
Qiyaasta Maamulka afka. Lo'da, idaha, riyaha iyo doofaarrada: 1 kaniini / 70kg miisaanka jirka. Digniinta Gaarka ah looma isticmaalin xilliga jiifinta digaag digaag. Waxay sababi kartaa isku dheelitir la'aanta dhirta mindhicirka, daawada muddada-dheer waxay sababi kartaa yareynta fiitamiin B iyo isku-dhafka fitamiin K iyo nuugista, waa inay ku daraan fiitamiinnada habboon. Falcelin Diidmo ah Isticmaalka muddada-dheer wuxuu dhaawici karaa kelyaha iyo nidaamka neerfaha, wuxuu saameyn ku yeelan karaa kororka miisaanka, waxaana laga yaabaa inuu ku dhaco sumowga sulfonamides. Muddada Bixitaanka C ...
AdvaCare waa soo saaraha GMP ee shirkadda 'Levamisole Hydrochloride Boluses'. Levamisole HCL Bolus wuxuu ka tirsan yahay fasal kiimiko ah oo loo yaqaan 'imidazothiazoles' waana had iyo jeer nooca daaweynta qiimo jaban ee anthelmintic ee xoolaha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa cusbo chloralhydrate, mararka qaarkoodna fosfooza. Levamisol HCL isticmaalka boliska eeyaha iyo bisaduhu way ka hooseeyaan xoolaha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in AdvaCare's levamisole HCL boluses loogu talagalay ujeedooyinka xoolaha oo keliya, waa inaad isticmaashaa oo keliya nooca leh ...
Cirbadda Ivermectin 1%
Ivermectin wuxuu ka tirsan yahay kooxda avermectins-ka wuxuuna wax ka qabtaa wareega gooryaanka iyo dulinku. Tilmaamaha Daaweynta wareegga gooryaanka caloosha, injirta, infekshinka sambabka, oestriasis iyo isnadaamiska ku dhaca weylaha, lo'da, ariga, idaha iyo doofaarka. Maareynta qandaraasyada-tilmaamidda xoolaha nuujinaya. Waxyeelada Marka ivermectin ay taabato carrada, waxay si fudud oo adag ugu xirtaa ciidda waxayna noqotaa mid aan firfircooneyn muddo kadib. Ivermectin bilaash ah ayaa laga yaabaa inuu si xun u saameeyo kalluunka iyo xoogaa biyo ...
Duritaanka Oxytetracycline 20%
Oxytetracycline waxay ka tirsan tahay kooxda tetracyclines waxayna wax ka qabataa bakteeriyada jeermiska badan ee Gram-positive iyo Gram-negative sida Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus iyo Streptococcus spp. Tallaabada oxytetracycline waxay ku saleysan tahay ka hortagga isku-darka borotiinka bakteeriyada. Oxytetracycline waxaa badanaa laga soo qaadaa kaadida, qayb yar oo ka mid ah bile iyo xoolaha nuujinaya caanaha. Hal irbad ayaa wax u qabata t ...
Duritaanka Tylosin 20%
Tylosin waa antibiyootiko macrolide ah oo leh tallaabo bacteriostatic ah oo ka dhan ah Gram-positive iyo bakteeriyada Gram-taban sida Campylobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus iyo Treponema spp. iyo Mycoplasma. Tilmaamaha Caabuqyada caloosha iyo neef mareenka ee ay keento noolaha yar yar ee xasaasiga ah ee tylosin, sida Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus iyo Treponema spp. weylaha, lo'da, riyaha, idaha iyo doofaarrada. Tilmaamaha qandaraaska ee xasaasiyadda ...
Duritaanka Levamisole 10%
Levamisole waa dawada loo yaqaan 'anthelmintic' oo leh firfircooni ka dhan ah dixiriga ballaaran ee dirxiga caloosha iyo ka soo horjeedka samada. Levamisole wuxuu keenaa kororka muruqyada muruqyada muruqyada oo ay ku xigto curyaanna gooryaan. Tilmaamaha Prophylaxis iyo daaweynta cudurada caloosha iyo sanbabada sida: weylaha, lo'da, riyaha, idaha: Bunostomum, Chabertia, Cooperia, Dictyocaulus, Haemonchus, Nematodirus, Ostertagia, Protostrongylus iyo Trichostrongylus spp. Doofaarka: Ascaris suum, Hyostrongyl ...
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay 216 shaqaale oo haysta shahaadada kuleejka ama ka sare, taasoo u dhiganta 80% tirada guud ee shirkadda.
Qarni badbaaday, dhaqashada xoolaha waa xoog badan tahay, beeraha waa barwaaqo
R & D-gaaga
Afar nooc oo dawooyin cusub oo qaran ah, lix nooc oo ah alaabooyin patent ah iyo saddex nooc oo hababka diyaarinta ah ee shatiyada la allifay ayaa la adeegsaday.
Wax soo saarkiisa waxaa loo dhoofiyaa 15 wadan (Ethiopia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, iwm).
Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegyada farsamada ee daawada xoolaha, iyada oo la diiwaan geliyey lacag dhan 80 milyan oo yuan.
Hadafka ah "Boqol Sano oo Nolol ah, Xannaanada Xoolaha ee Xoogan iyo Barwaaqada Beeraha", shirkaddu waxay ka go'an tahay inay noqoto mid heer-koowaad ah oo heer caalami ah oo bixisa wax soo saarka daaweynta xoolaha ee ku saleysan tikniyoolajiyadda iyo hibada.